Help the Victims in Arakan: ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လှူဒါန်းရာနေရာ
ရခိုင်ပြည် ဂီရိမုန်တိုင်း လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အလှူခံနှိုိုးဆော်လွှာ
၂၂-၁၀-၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် (၁) နာရီ မိုင်၁၂၀ ကျော်နှုံးဖြင့် အင်အားပြင်ထန်စွာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သော GIRIအမည်ရှိ သောမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပြည်သူများစွာတို့၏ အသက်အိုးအိမ်လယ်ယာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ သည်။
ဤသို့ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဒေသများတွင်နေထိုင်ကြသောပြည်သူများသည် လက်ရှိအခြေနေတွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအဖြစ် (ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း) စသည် များတွင် ခိုလှုံနေကြရပြီး၊ စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲ များစွာဖြင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်အဓိကခံရသောဒေသများတွင် ရွာလုံးကျွတ် ပျက်စီး၊ ပျောက်သွားပြီး၊ အသေပျောက်များစွာရှိသည့်အပြင်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာခံစားနေရသည်ကိုသိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်းအခြေနေကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန်အတွက် “ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များ” မှာ အရေးပေါ်အစည်းဝေးခေါ်ယူပြီး၊ ၂၃. ၁၀. ၂၀၁၀ ညတွင် “ရခိုင်ပြည် ဂီရိမုန်တိုင်းလေဘေးဒုက္ခသည်များ ကူညီထောက်ပံ့ ရေးကော်မတီ” အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အများပြည်သူစေတနာရှင်များအနေဖြင့် လေဘေးဒုက္ခခံခဲ့ရသောဒုက္ခသည်များကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် မိမိတို့ စွမ်းအားရှိသမျှ ပါဝင်လှူဒါန်း ကြပါရန်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည် ဂီရိမုန်တိ်ိုင်းလေဘေးဒုက္ခသည်များကူညီထောက်ပံ့ ရေးကော်မတီ။
(6)ဦးကဝိန္ဒ္ဒ bkk (0851663197)
0 Responses to ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လှူဒါန်းရာနေရာ